Mila miova ny vola! Ianaro ireo teknika casino an-tserasera hitantanana vola hividianana vola. - ФОРУМ "ВСЕ ОБ АВТОМОБИЛЯХ"
Обсуждение вопросов диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей Статьи для обсуждения Самые эффективные средства и способы очистки форсунок
Mila miova ny vola! Ianaro ireo teknika casino an-tserasera hitantanana vola hividianana vola.
Пишем как продлить работу форсунок
Сообщение Yortvandy8899 » 02 фев 2020, 13:52
Raha momba ny filokana amin'ny filokana an-tserasera amin'ny lalao an-tserasera dia tsy misy foto-kevitra sarotra na foto-kevitra sarotra izay mitaky fitantanana renivohitra sy fikarakarana mialoha kokoa. Ho an'ny fombafomba naseho ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny fomba hanomezana vola. Hanampy amin'ny famatsiana vola ho an'ny mpifaninana mahomby kokoa izy ity, afaka ampiasaina amin'ny casinos tena izy sy an-tserasera. paoypaet.com
Amin'ny fampiasana ity kaody ity dia andao isika hanomboka amin'ny fizarazarana ny renivohitra ampiasaina amin'ny lalao ho fizarana 2 voalohany. Ny ampahany voalohany amin'ny fidinana dia antoka fa hitranga ny fahombiazana. Izay mety ampiasainay ampiasaintsika hafa arakaraka ny fahaizanao, ny ambiny dia zaraina ho latsa-bidy mitaky vintana Ny casinos an-tserasera, izay mety tsy lalao filokana izay hilalao matetika, satria indraindray ny lalao izay antenaintsika dia hiteraka fanaintainana mafy ary noho izany dia tsy maintsy mitady lalana mandositra hafa.
Izay raha ataontsika izany, na dia resy vola be aza isika amin'ny lalao mety Saingy raha sendra vintana ianao amin'io andro io Azontsika atao koa ny manampy ny kilalao tsy eto. Fa raha ny ampahany voalohany amin'ny vola izay ilaintsika tsara amin'ny lalao mety hahazoantsika tombony dia hanangona ny antsasaky ny vola isika tsy hilalao lalao filokana. Mba ho afaka mitady vola mora foana amin'ny ampitson'iny
Misy ihany koa ny pika mahaliana hafa ho an'ny casinos an-tserasera. Ny vola dia zaraina ho faritra maro araka izay tiantsika. Azo zaraina araka ny karazan-dalao tiantsika ny milalao, manana ny anjara milalao ny lalao, afaka mampiasa vola mitovy ihany koa isika Ity formula ity dia hanampy amin'ny fampandehanana kokoa ny tany am-boalohany.
Вернуться в «Самые эффективные средства и способы очистки форсунок»